अस्ट्रेलिया'मा गर्मि बढ्यो पौडिनु भन्दा पहिले यी कुराहरुमा ध्यान दिनुहोला ! —
अस्ट्रेलिया’मा गर्मि बढ्यो पौडिनु भन्दा पहिले यी कुराहरुमा ध्यान दिनुहोला !
अस्ट्रेलिया । अस्ट्रेलियामा बिस्तारै बिस्तारै गर्मि बढ्दै गएको छ ! समर सिजन सुरु भएसँगै दिन प्रतिदिन गर्मि महसुस हुन थालेको छ ! गर्मि महिना मा चिसो पानि मा गएर पौडिनु हो मजा नै छुट्टै आनन्ददायी हुन्छ ! तर अस्ट्रेलियामा पछिल्लो समय पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर ज्यान गुमाउने को संख्या पनि बढ्दै गैरहेको छ ! त्यसकारण पौडी खेल्ने क्रममा सतर्कता अपनाउनु जरुरि हुन्छ ! तथ्यांक हेर्दा पछिल्लो वर्ष मात्र २ सय ३७ जनाले पानीमा डुबेर ज्यान गुमाएका छन् !
पानीमा डुबेर नेपालीहरुको समेत मृत्यु हुने दर बढ्दै गएकोप्रति सर्वत्र चिन्ता बढ्न थालेको छ ।यसरी डुबेर मृत्यु हुने घट्ना बढ्नुमा व्यक्ति स्वयमको लापारवाही र असावधानी प्रमुख कारण मानिएको छ । पौडी खेल्ने कलामा निपूर्ण नभएका र पानीको गहिराईको अन्दाज थाहा नपाईकन पानीमा बस्नेहरु डुबानमा पर्ने गरेका छन् ।
अष्ट्रेलियाको जल सुरक्षा विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार विगत ११ वर्षमा झण्डै ३ हजार बढी पौडी खेल्ने क्रममा डुबेका छन् । यसको अर्थ हरेक वर्ष औसतमा २८३ जनाले पौडी खेल्ने क्रममा ज्यान गुमाउने गर्दछन् ।प्रतिवेदन अनुसार मद्यापान गरेर वा लागू औषध सेवन गरेर पौडिने व्यक्तिहरु बढी डुबेर मृत्यु हुने गरेको पाइएको छ । पौडिने क्रममा डुबेर मृत्यु हुने ३४ प्रतिशत यस्ता व्यक्तिहरु हुने गरेको बताइएको छ ।
जल सुरक्षा विभागले पौडी खेल्न जाँदा सावधानी अपनाउन र आफ्नो सुरक्षाको बारेमा विशेष ख्याल गर्न अपिल गरेको छ ।
सुरक्षाका लागि पौडी खेल्न जानुअघि यी कुराहरुमा विशेष ध्यान दिन भनिएको छ :
१ सधैं रातो र पहेंलो झण्डाको बीचमा मात्र पौडनुहोला ।
२ समुद्री तटको किनारामा राखिएका सूचना र चिन्हका बारेमा राम्ररी पढेर र बुझेर मात्र पानीमा पस्नुहोला ।
३ पानीमा पस्नु भन्दा अघि लाइफगार्ड र लाइफ सेभरहरुसँग सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक परामर्श लिनुहोला ।
४ साथीसँग मात्र पौडी खेल्नुहोला । पानीमा एक्लै पस्नु वा पौडनु भन्दा साथी लिएर मात्र पौडिनु बुद्धिमानी मानिन्छ । अझ बालबालिकाहरुलाई त एक्लै कहिल्यै पानीमा पस्न नदिनुहोला ।
५ केही गरि पानीमा डुबिहाले नआत्तिनुहोला । बरु टाउको भन्दा माथि हात उठाएर लाइफगार्ड वा अरु व्यक्तिको ध्यान तान्ने कोशिस गर्नुहोला ।
६ मद्यपान वा कुनै औषधि सेवन गर्नुभएको छ भने पानीमा पस्दै नपस्नुहोला ।
७ पौडिन पानीमा पस्दा सन ग्लास अनिवार्य लगाउनुहोला । साथै पानी निल्नबाट जोगिनुहोला ।
८ लोकल मौसम पूर्वानुमान शाखाले गरेको मौसमको भविष्यवाणीलाई अवश्य मान्नुहोला ।
९ यदि कुनै व्यक्ति डुबिरहेको देख्नुभयो र तपाई सहयोग गर्न असमर्थ हुनुहुन्छ भने ट्रिपर जेरो नम्बरमा इमर्जेन्सी खबर गरिदिनुहोला ।
अस्ट्रेलियामा गत १ बर्षमा २२ पुरुषहरुले ब’च्चा जन्मा’ए…..
आज रूपाको जन्मदिन…’ह्याप्पी बर्थडे’ रूपा
नक्क’लि बिवाह गरेर अष्ट्रेलिया जाने युवायुवतीको संख्या बढ्दो
अस्ट्रेलिया : सुरज पौडेल / नेपालमा हाड’नाता सम्ब’न्धमा विवाह चल्दैन । कानून’अनुसार यदी विवाह भयो भने...
अष्ट्रेलियाको डिपेन’डेन्ट भिसा अस्वी’कृत हुन’बाट कसरी बच्ने ? डिपेन’डेन्ट भिसा’बारे सम्पूर्ण जान’कारी
अस्ट्रेलिया । अष्ट्रेलिया’मा आएको व्यक्तिले आफ्नो जीवन’साथी’लाई डिपेन’डेन्ट भिसामा ल्याउन सक्छ । तर , डिपेन’डेन्ट भिसाको...
अष्ट्रेलियाको एक होटल’मा जब श्री’मती’ले बिल ति’र्न मानिनन्
सिड्नी । पति पत्नी’बीच झ’ग’डा हुनु आम कुरा हो । उनी’हरु’बीच के कारणले झ’ग’डा पर्छ ।...